IPenpot: I-Open Source Prototyping and Design Platform | Kusuka kuLinux
Kuhlala kukuhle njalo, ikakhulukazi emkhakheni we Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile, sinamathuluzi weSoftware, afakekayo noma awewebhu, futhi asivumela yenza imisebenzi zezinhlobo ezahlukahlukene kuye a izinga lobuchwepheshe futhi nge i-excelente calidad.
Futhi-ke, uma zikhululekile noma okungenani zivulekile, kungcono kakhulu. Futhi lokhu kunjalo "Ipeni", elizichaza njengokuthi Umthombo wokuqala ovulekile wokuqhafaza nokuklama ipulatifomu eyenzelwe amaqembu ahlukahlukene.
Ngaphambi kokuthi ukhulume "Ipeni", njengokujwayelekile, sizoncoma ukuthi uhlole ngemuva kokufunda le ncwadi, okushicilelwe kwakamuva okuhlobene nesihloko se- «Izinhlelo Zokusebenza Ezihamba Phambili Ezisebenza Kakhulu Nezinsiza Zokusebenza kuLinux»kokubili ekhaya nasemsebenzini.
"Njengoba sekuveziwe kaningi, kulokhu nakweminye imithombo yezindaba ye-Intanethi noma iziteshi, ukusetshenziswa kwamaHlelo wokuSebenza wamahhala futhi avulekile, njenge-GNU / Linux, kanye nomlando wayo omkhulu, okhulayo, osebenzayo futhi osebenzayo wezinhlelo zokusebenza zamahhala nezivuliwe. Mahhala noma cha, enza noma yimaphi ama-Distros nezinhlelo zokusebenza atholakalayo isisombululo esihle kakhulu, esifinyelelekayo nesisebenzayo se-IT yemisebenzi yomuntu siqu neyobungcweti, okungukuthi, ukusebenza ekhaya nasehhovisi."
1 IPenpot: Ipulatifomu ye-Web Prototyping and Design
1.1 Yini iPenpot?
1.2 Kungani zama ukusebenzisa iPenpot?
IPenpot: Ipulatifomu ye-Web Prototyping and Design
Ngokuya ngonjiniyela bayo kufayela layo le- Iwebhusayithi esemthethweni, "Ipeni" kufana nezwi nezwi ngokulandelayo:
"Isisekelo sokuqala somthombo ovulekile wokuqamba nokuklama kwamathimba ahlukahlukene. Akuncikile kuzinhlelo zokusebenza, iPenpot isuselwe kuwebhu futhi isebenza ngamazinga wewebhu avulekile (SVG). Kuwo wonke umuntu futhi unikwe amandla ngumphakathi."
Kungani zama ukusebenzisa iPenpot?
Impela, emhlabeni wamahhala futhi ovulekile, akukho okusebenza kuwo wonke amathuluzi esoftware aphathelene, avaliwe, futhi athengiswayo. Ngaphezu kwakho konke, maqondana ne- design kanye prototype amathuluzi uhlobo lwe I-Adobe XD, i-Codiqa, i-Figma, i-Framer, i-HotGloo, i-Invision, i-Pidoco, i-PowerMockup, i-Sketch ne-Webflow.
Ngalokho, "Ipeni" Kuza ukugcwalisa isikhala kulokhu. Futhi ngaphezu kwakho konke, ngaphandle kokuthi kusuka Umthombo Ovulekile, ukuthi, ukuba iwebhu ngokuphelele kufinyeleleke kuwo wonke umuntukungakhathalekile ukuqeqeshwa kwakho, amakhono noma amandla okuthenga.
"Ipeni" ingaba wusizo kakhulu kochwepheshe abaningi bokudizayina, ngoba, ukuba yi- ithuluzi lamahhala le-UX / UI lomthombo ovulekile kwenza kube lula konjiniyela ukuthi babambe iqhaza kunqubo yokwakhiwa kwemikhiqizo ekhiqizwayo, ngaleyo ndlela kuvalwe igebe phakathi UX / UI futhi i Onjiniyela.
Kuyaphawuleka ukuthi, "Ipeni" yenziwe yinkampani ebizwa Umthombo Ovulekile we-Kaleidos osekuyisikhathi eside eyaziwa ngokuzibophezela kwakhe ku- Isoftware yamahhala nomthombo ovulekile.
Kafushane singasho okulandelayo okubaluleke kakhulu:
Ine-interface enobungani futhi elula kakhulu ukuyisebenzisa kuwebhu, eyenza ukuthi ilungele amaqembu amaningi, ikakhulukazi ahlukahlukene.
Inamathiselwe kumazinga avulekile, ikakhulukazi i-SVG. Okwenza amafayela akho ahambisane namathuluzi amaningi we-vector.
I-multiplatform ngokuphelele, ngoba, njengoba isuselwa kuwebhu, ayixhomeki ku-Operating Systems noma ekufakweni, kuphela isiphequluli sesimanjemanje lapho izosetshenziswa futhi yilokho kuphela.
Yakhelwe futhi yanikezwa amandla ngumphakathi. Ngakho-ke, inikezela ukuzivumelanisa nezimo ngokweqile, ngoba ivumela ukunikelwa kwama-add-ons (ama-plugins), phakathi kweminye iminikelo eminingi.
Ukwazi kabanzi nge- "Ipeni", ungahlola izixhumanisi zayo ezisemthethweni ezilandelayo:
Indawo Esemthethweni ye-GitHub
Imibuzo Ebuzwa Njalo (Faq)
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" cishe «Penpot» elizikhuthazayo, njengowokuqala «Plataforma de diseño y creación de prototipos de código abierto» yenzelwe amaqembu ahlukahlukene; inentshisekelo enkulu futhi iyasiza, kuyo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » IPenpot: I-Open Source Prototyping and Design Platform
Ngihlala nginjani, yini? Ngiyazi nje ukuthi iyithuluzi lokulingisa, konke okunye kuyisaladi yamagama azungeze isoftware yamahhala. : /
Ukubingelela, Autopilot. Impela eminye imibhalo ifundisa kakhulu kuneminye, kanti eminye ifundisa kakhulu-isebenza kuneminye. Kulokhu, kuyafundisa futhi izixhumanisi ezisemthethweni zisele, ukuze kuthi ngemuva kolwazi oluyisisekelo nolubalulekile mayelana nesicelo esiphawuliwe, umfundi angene kwimithombo yokuqala.